YEYINTNGE(CANADA): Friday, July 29
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/29/2011 1 အကြံပြုခြင်း
၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ အပြင်းအထန် စတင်ပြင်ဆင်သော အကြိုကာလတွေဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၉ ဒီဇင်္ဘာလကကစပြီး ဘယ်လမ်းလိုက်ကြမလဲနှင့် လက်တွေ့နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို စတင်ရေးခဲ့တာ အခု(၁၈)စောင်မြောက်ပါပြီ။
ရေးရခြင်းရဲ့ အဓိကကျတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုက မူလရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲစရာမလိုဘဲ ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ အခြေအနေသစ်တွေနှင့်အညီ လုပ်နည်း ကိုင်နည်းသစ်တွေကို လက်တွေ့ကျကျ ကိုင်စွဲစေလိုတဲ့စေတနာ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်နည်းကိုင်နည်းသစ်၊ လက်နက်သစ်တွေကို ထိထိမိမိ ရယူမကိုင်စွဲနိုင်လျှင် အသစ်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာသစ်အတွက် လက်နက်သစ်တွေ ချို့တဲ့သွားအောင် မိမိကိုယ်တိုင်ကဘဲ တမင်လုပ်ဆောင်လိုက်သလို ဖြစ်သွားမှာ စိုးရိမ်တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးရည်သုံးရတဲ့ နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲမျိုးကို ဦးပေါ်ဦးလျှောက်တဲ့ ကျွဲနိုင်၊ နွားနိုင် အမြင်မျိုးနှင့်သာ အမြဲသုံးသပ်နေလို့ မရတတ်ပါဘူး။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုတ်တာမှန်သမျှ မလိုချင်ဘူး ဆိုသူများအတွက်ကတော့ ထိုးမဲ့ဆင် နောက်တစ်လှမ်းဆုတ်ရခြင်းသဘောကို နားလည်ရန် ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာလည်း အမြဲတမ်း ထင်သာမြင်သာ(Black and White)ဖြစ်မနေဘူး။ ချိန်ဆရ ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေ(Grey Area)တွေကိုလည်း တာဝန်ခံဖြတ်ကျော်ရဲရပါတယ်။ သဘောတရားနှင့် လက်တွေ့ဘဝ သဟဇာတမဖြစ်ဘူးဆိုတာကို မြင်နိုင်တဲ့အခါမှာ လက်တွေ့ဘဝကို ရေတိုအနေနှင့်ဖြစ်ဖြစ် မလွှဲမရှောင်သာ ရှေ့တန်းတင်ပေးရတတ်ပါတယ်။ ဒါကို မူလအခြေခံသဘောတရားတွေက ရှောင်ပြေးတယ်လို့ မယူဆနိုင်ပါဘူး။
ရွေးကောက်ပွဲကာလကို ပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုလျှင် ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံကို လက်ခံလိုက်ရပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းကို နိုင်ငံရေးလက်တွေ့ဘဝလို့ မြင်နိုင်ရမယ်။ နောက်ဆုတ်သွားတယ်၊ အညံ့ခံသွားတယ်လို့ မသတ်မှတ်နိုင်ပါဘူး။ ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံကို သဘောမတူသော်လည်း နိုင်ငံရေးလက်တွေ့ဘဝ လိုအပ်ချက်အရ မလွှဲမရှောင်သာ အသိအမှတ်ပြုပေးခြင်းသာ ဖြစ်ရပါမယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းသည် အသစ်ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ နိုင်ငံရေးလက်နက်သစ် အပိုတစ်ခုကို ရယူကိုင်ဆွဲခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်းကို ထိုကာလက ဆောင်းပါးတွေမှာ ထင်သာ မြင်သာအောင် ရေးခဲ့ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲက အတု၊ အစိုးရလည်း အတု၊ စစ်တပ်ကသာ အာဏာဆက်ချုပ်ထားမယ်၊ အမတ်တွေ ဘာမှ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအရ မြန်မာစာဖတ်တတ်သူတိုင်း သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်စေချင်တာက နိုင်ငံရေးစင်(political Space)ကို ရယူစေချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရင်ခံအတိုင်ပင်ခံကောင်စီမှာ ဂဠုံဦးစောလည်း ဝင်ဘူးတာဘဲ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလည်း ဝင်ဘူးတာဘဲ။ ဂဠုံဦးစောနှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တူပါသလား။ မေးခွန်းက နိုင်ငံရေးစင်ပေါ် (သို့မဟုတ်) လွှတ်တော် တက်သင့် မတက်သင့် မဟုတ်ပါဘူး။ မေးရမှာက အချောင်သမားတွေ တက်လာမှာလား။ တိုက်ပွဲဝင် လူထုခေါင်းဆောင်တွေ တက်လာမှာလား ဆိုတာသာ ဖြစ်ရပါမယ်။ နိုင်ငံရေးစင်ရဲ့ ထိရောက်ပုံကို ဂျူးလိယက်ဖူးချစ်နှင့် ကပ်စ်ရိုရဲ့ ကမ္ဘာကျော် လျှောက်လဲချက်များ စာအုပ်တွေမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကို ဖျက်နိုင်တဲ့ အင်အားမရှိဘူးဆိုရင်၊ ရွေးကောက်ပွဲနောက် ဖြစ်ထွန်းလာမဲ့ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကို ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်က အယူအဆ၊ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေနှင့်ချည်းသာ ဆက်သွားလို့ မရနိုင်ဘူးဆိုတာကို မြင်နိုင်ရင် ရွေးကောက်ပွဲကို မလွှဲမရှောင်သာ ဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူအကျိုးရှိစေမယ်လို့ ယုံကြည်ရင် ခေါင်းဆောင်လုပ်သူများဟာ ပြည်သူသိပ်မကြိုက်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို တာဝန်ခံလုပ်ရတတ်တာက နိုင်ငံရေးသင်ရိုး ကကြီး ခခွေးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ခုပ်သံမှာချည်း မသာယာတတ်သလို၊ မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်အတွက် ဝေဖန်ပြစ်တင်သံတွေကိုလည်း ရင်ဆိုင်ရဲရပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလမှာ အချုပ်အနှောင်ခံနေရပြီး ပြည်သူနှင့် အဆက်ပြတ်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီမိုကရေစီကို မဖေါ်ဆောင်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် သိက္ခာကင်းမဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေကို လက်မခံနိုင်ပေမဲ့ ပါတီရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကို ခံယူသွားမယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမတော့ အင်အယ်လ်ဒီပါတီသည် အခြေအနေအရ ပါတီကို မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲကာလကို ပြည်သူနှင့်အတူ အအုပ်အစည်းမပျက် သပိတ်မှောက်ဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းကို လက်တွေ့ကျကျ သုံးသပ်ကြမယ်ဆိုရင် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသည် ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံ၏ ရလဒ်(Product)ဖြစ်ပါတယ်။ မဲခိုး မဲလိမ်၍ တက်လာသော ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသည် မတရား ခြိမ်းချောက်ပြီး အတည်ပြုခဲ့သော ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံကဲ့သို့ Fait of Accompli (ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ တရားသည်ဖြစ်စေ၊ မတရားသည်ဖြစ်စေ ဖြစ်တည်လာသော အရှိတရား) ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် တောင်းဆိုခြင်းသည် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို မလွှဲမရှောင်သာ အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို မလွှဲမရှောင်သာ အသိအမှတ်ပြုမယ်ဆိုရင် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို မွေးထုတ်ပေးတဲ့ ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်း မလွှဲမရှောင်သာ အသိအမှတ်ပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်သောက်မယ်၊ အဖတ်မစားဘူးလုပ်လို့ကတော့ ဂွကျနေပါလိမ့်မယ်။ အခြေအနေအရ အသိအမှတ်ပြုရခြင်း(Recognition)ကို အညံ့ခံခြင်းဟုသာ တစ်ကြောင်းတည်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်တတ်သူများသည် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာရေးတို့၏ အခြေခံ သဘောသဘာဝကို လက်ခံ နားလည်ကျင့်သုံးနိုင်သူများ ဖြစ်နိုင်မည် မထင်မိပါ။
လက်ငင်းအခြေအနေမှာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေးပြသနာများကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ဖို့၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိရောက်စွာ အထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့နှင့် ပြည်သူလူထုနှင့် ကျယ်ပြန့်စွာ ထိတွေ့နိုင်ဖို့၊ ပါတီကျစ်လစ်တောင့်တင်းဖို့ စသည်၊ စသည်တို့အတွက် ဘက်ပေါင်းစုံက ခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးနောက် ပါတီကို ထပ်မံမှတ်ပုံတင်ရန် သင့်၊ မသင့်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော အင်အယ်လ်ဒီက ဆုံးဖြတ်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မပြောင်းလဲသော မူလအခြေခံ သဘောတရားတစ်ခုက ပြည်သူလူထုအကျိုးကို ဘယ်သောအခါမျှ မျက်ခြေမပြတ်ဘဲ ဦးထိပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုအကျိုးကို ပါတီအကျိုးထက်၊ ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးထက် အလေးထားရမယ်။ ပြည်သူလူထု အကျိုးရှိဖို့ဆိုလျှင် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာမှန်သမျှကို မတွန့်မဆုပ် လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစဉ်တစိုက် ပြောကြားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂျူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၁၁မှာ ဦးအောင်ကြည်နှင့် တွေ့ဆုံပြီးစဉ်ကလည်း
“ဘာပဲလုပ်လုပ်၊ ဘာစကားပဲ ပြောပြော၊ ဘယ်သူနဲ့ပဲ တွဲတွဲ၊ ကျမတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ နိုင်ငံနဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် ပြည်သူပြည်သားတွေကို အကျိုးပြုဖို့ပါပဲ။ ဒါကိုပဲ ကျမတို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။
အားလုံးကြိုက်တဲ့၊ အားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့၊ အပြစ်အနာဆာကင်းတဲ့၊ မေးခွန်းအားလုံးကို ဖြေနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ဆိုတာ လောကမှာ မရှိပါဘူး။ ပြည်သူကော၊ တိုင်းရင်းသားတွေကော၊ တပ်မတော်(ဗိုလ်ချုပ်တစ်ချို့ကတော့ မသေချာပါ)ကော လက်ခံနိုင်တဲ့၊ စစ်မှန်သော တိုင်းရင်းသားသွေးစည်းရေးကို အကောင်အထည် ဖေါ်ပေးနိုင်မဲ့၊ ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ကြီးကို တည်ဆောက်ပေးနိုင်မဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နိုင်ငံရေး ရှေ့ခြေလှမ်းနှင့်အတူ ပြည်သူတွေကလည်း တက်ညီလက်ညီ ဆက်လှမ်းနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ အသေအချာ ယုံကြည်မိကြောင်းပါဗျာ။
အောင်တင် ဂျူလိုင် ၂၉၊ ၂၀၁၁
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/29/20110အကြံပြုခြင်း
29 July 2011 Yeyintnge's diary.doc
671K View Download
29 July 2011 Yeyintnge's diary.pdf
29 July 2011 Yeyintnge's Diary
Burmese woman body was found dead in Coronado, Calif.
Updated 2d 3h ago
LOS ANGELES — Rebecca Zahau, the Burmese woman whose body was found hanging nude atahistoric oceanfront mansion, has been laid to rest by her family and millionaire boyfriend as the mystery over her death remains unresolved.
Rebecca Zahau was found dead, hanging with her hands and feet bound, naked, atamansion in Coronado, Calif., earlier this month.
Investigators with the San Diego Sheriff's Department, who are probing the suspicious death in Coronado this month, await toxicology results from Zahau's autopsy. Sgt. Roy Frank of the department's homicide unit said, "We're still weeks out" from concluding whether Zahau committed suicide or was murdered.
He said they are also looking into any connection to the death of her boyfriend's 6-year-old son after an accident in the same home two days earlier.
Zahau's sister, Mary Zahau-Loehner, 33, said Monday she doesn't believe her sister killed herself.
"I still believe my sister didn't take her life," Zahau-Loehner said in an interview.
She issuedawritten statement on behalf of the Zahau family saying, "Rebecca valued her life and lived her life to its fullest. Rebecca loved God, her family and life."
Zahau-Loenher said she and other members of her family are grief-stricken and don't know what to think about how Zahau died.
Zahau, 32, who came to the USAalittle overadecade ago, was buried Saturday by her family in Saint Joseph, Mo., where her parents and other family members live.
Jonah Shacknai, 54, founder and CEO of Medicis Pharmaceutical, the Scottsdale, Ariz., maker of the wrinkle-filling, injectible gel Restylane and other cosmetic drugs, attended the graveside service for his late girlfriend and was welcomed by her family, Zahau-Loehner said.
Zahau and Shacknai lived in Arizona and spent part of the year in the 12-bedroom Coronado mansion, originally built in 1908. He paid $12.75 million for the home four years ago.
Frank said police responding toacall early July 13 found Zahau's body on the ground inacourtyard of the mansion. He said Shacknai's brother Adam, 47, reported he found her hanging byanoose fromabalcony and cut her down in an attempt to revive her. Her feet were bound and her hands were bound behind her back, Frank said.
The death came two days after Shacknai's 6-year-old son, Max, sufferedafall on the main staircase of the mansion while he was in the home with Zahau. Max was declared dead July 17 and his organs donated to three other children.
Frank said investigators are probing "victimology," or the actions and state of mind of Zahau before her death, and whether her death may have been related to the child's fall.
"Any time there'sadeath such as this we're always going to look at victimology," Frank said. "What was going on in her life? … Max's incident is something we would look into as well.
"To say it's associated … that's still up to the investigation," Frank said.
Jonah Shacknai has not publicly commented beyond two brief written statements, issued jointly with his ex-wife, Dina Shacknai. One disclosed the death of their son;asecond lamented "the unfortunate attention" news media have given to police records in Arizona about the couple's quarrels and allegations of physical violence toward each other. No arrests were made when police responded to two domestic disturbances in 2008 and 2009.
Shacknai and his wife were divorced in January. She maintainsasummer home in Coronado near the Spreckels Mansion where the twin tragedies took place.
The deaths, under mysterious circumstances in the wealthy beach resort where violent crime isararity, have attracted worldwide attention and speculation.
Frank said neither Shacknai nor his ex-wife was in the home when their son fell, but Zahau and another child were present.
Shacknai was not in the home when Zahau's body was discovered. At the time, his son was on life support at Rady Children's Hospital San Diego.
Frank said Shacknai and other family members have cooperated with investigators.
Adam Shacknai of Memphis did not answer phone calls to his home. Jonah Shacknai has retainedaLos Angeles public relations and crisis management firm to handle media inquiries and is not making further statements, pending the investigation.
Zahau-Loehner, in one of several phone interviews in recent days, complained that she and other family members have not been given information by authorities about their sister's death. "We are out of the loop," she said.
by politics on July 29, 2011
လစ်ဗျား ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှုးကြီး မွမ်မာ ကဒါဖီ ရဲ့တပ်တွေ ကို ထိုးစစ်ဆင် တိုက် ခိုက်နေ တဲ့
လစ်ဗျား အသွင်ကူးပြောင်းရေး အမျိုးသား ကောင်စီရဲ့လက်နက် ကိုင် တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ လစ်ဗျား
လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အက်ဗ္ဗဒူလ် ဖာတာ ယူနစ် ဟာ လက်နက်
ကိုင် တပ်ဖွဲ့တစ်ခု ရဲ့ချုံ ခို တိုက် ခိုက်မှု ကြောင့် ကျဆုံး သွားတယ် လို့ဘန်ဂါဇီ က လာတဲ့ ရိုက်
တာ သတင်း တစ်ရပ် မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကြာသပတေး နေ့ နံနက် အစောပိုင်းက ရှေ့ တန်း စခန်း တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ဘရီဂါ ကနေ သူ့ ကို စစ်
မေး စရာ ရှိ လို့ဖမ်းဆီး လာ ချိန် မှာ အတိုက်အခံ တွေ ထိမ်း ချုပ် ထား တဲ့ ဘန်ဂါဇီ မြို့အရောက်
မှာ တိုက် ခိုက် ခံ လိုက် ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့အတူ သူရဲ့ကိုယ်ရေး လက်ထောက် ဗိုလ်မှုး တစ်
ဦး နဲ့ဗိုလ်မှုးကြီး တစ်ဦး တို့လည်း ကျဆုံး ခဲ့ ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အက်ဗ္ဗဒူလ် ဖာတာ ယူနစ် ဟာ ကဒါဖီ ရဲ့အားထား ရဆုံး ညာလက်ရုံး တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး
သူဟာ စစ်ဘက်မှာ အမြင့် ဆုံး ရာ ထူး နဲ့ပြည်ထဲ ရေး ၀န်ကြီး ရာထူး ကို ရယူထား သူ တစ်ဦး ဖြစ်
ကဒါဖီ ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေ ကို လက်နက် မှောင် ခို ရောင်း ချပေး တယ် ဆို တဲ့ စွပ်ဆွဲ ချက် နဲ့လစ်ဗျားအ
သွင်း ကူးပြောင်း ရေး ကောင် စီက သူ့ ကို စစ်မေး ဖို့အတွက် ဖမ်းဆီး ထားတဲ့ အချိန် မှာ သေဆုံး ခဲ့
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အက်ဗ္ဗဒူလ် ဖာတာ ယူနစ် ဟာ ကဒါဖီ ရဲ့သစ္စာခံ တွေ လက်ချက် နဲ့ကျဆုံး သွားတယ် လို့ 
အသွင်းကူးပြောင်း ရေး ကောင်စီက အကြီး အကဲ Mustafa Abdul Jalil က ထုတ်ဖော် ပြောဆို ပါတယ်။
ယခု နှစ် ဖောဖော်ဝါရီလ လစ်ဗျား နိုင်ငံ မှာ လူထု အုံကြွမှု တွေ စတင် တဲ့ အချိန် လစ်ဗျား စစ်ခေါင်းဆောင်
တွေ ဘက်ပြောင်း တဲ့ အထဲ မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အက်ဗ္ဗဒူလ် ဖာတာ ယူနစ် လဲ ပါဝင် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လစ်ဗျား နိုင်ငံ ရေး လေ့လာသူတွေ ကတော့ လစ်ဗျား အတိုက်အခံ တွေ ထဲ မှာ အကွဲ အပြဲတွေ ရှိ နေပြီး
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အက်ဗ္ဗဒူလ် ဖာတာ ယူနစ် ကျဆုံး သွား တဲ့ အတွက် လစ်ဗျား လက်နက် ကိုင် သူပုန် တွေ
ကို ထိမ်း ချုပ် ဖို့ပို ခက် တယ် လို့ဆိုကြပါတယ်။
လစ်ဗျား အသွင်ကူးပြောင်း ရေး အမျိုး သား ကောင်စီ ကို တရား ၀င် အစိုး ရ အဖြစ် အမေရိကန် နဲ့ 
ဗြိတိန် တို့က အသိအမှတ် ပြု ထား ကြပါတယ်။
လစ်ဗျား နိုင်ငံ ရဲ့အရှေ့ ပိုင်း နဲ့နိုင်ငံ ရဲ့အနောက် ပိုင်း က သူပူန် တွေ လစ်ဗျား မြို့ တော် ထရီပိုလီ ပကို
ချီင်္တက် လာ ချိန် မှာ အခု လို လုပ် ကြံခံလိုက်ရတာ ဇြစ်ပါတယ်။